Tirada dadka u dhintay caabuqa corona oo korodhay - BBC News Somali
Tirada dadka u dhintay caabuqa corona oo korodhay
Tirada dadka u dhintay caabuqa oo korodhay
Mas'uuliyiinta dalka Shiinaha ayaa sheegay in dad gaaraya 106 qof ay u dhinteen caabuqa corona, halka afar kun oo kalena uu haleelay xanuunka.
Magaalada Wuhan oo ah halkii uu markii hore ka dilaacay caabuqan ayaa haatan go'donsan, waxaana la xiray dhammaan waddooyinka soo gala magaaladaas.
Mas'uuliyiinta magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha ayaa isbitaal cusub ku dhisaya muddo lix maalmood gudahood ah, si loogu daweeyo bukaannada looga shaki qabo inay qaadeen cudurka coronavirus.
"Wuxuu noqonayaa isbitaal dadka xanuunka qaba lagu karantiili doono, qoysaskuna ay u soo diri doonaa xubnaha uu cudurka ka haleelay, waxaana halkaas laga heli doonaa qalabka badbaadada oo dhammeystiran", sidaas waxaa yiri Joan Kaufman, ah macallin caafimaadka ka dhiga iskuulka Harvard.
"Shiinaha wuxuu taariikh u leedahay in mashaariicda noocan ah si dhakhso ah loo fuliyo", ayuu yiri Yanzhong Huang, oo ahmacallin kale oo wax ka dhiga culuumta caafimaadka adduunka iyo xiriirka caalamiga ah.